အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခွန်အားနဲ့ ဘဝပေါင်းများစွာကိုလမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့Hichki(2018)
23 Jun 2018 . 1:49 PM
အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်သလို မွေးရာပါပင်ကိုယ်ချို့တဲ့ မှုရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့  ဘဝကို အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိကိုဖော်ပြတဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ Hichki(2018) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရဲ့  နာမည်ကြီးဘောလီးဝုဒ် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Rani Mukerji ရဲ့  ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတွေ့ရမယ့် အပြင် မွေးရာပါတက်တဲ့ရောဂါရှိသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတလျောက်လုံးမှာ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်မှု ဟာ သူမရဲ့  အနုပညာအပေါ်အရည်အချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ Sidharth P Malhotra က ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာပြသခဲ့တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ထွက်ထားတာတောင် လပိုင်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့  အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ မင်းသမီး Rani Mukerji ပါ။ သူမဟာ ဒီဇာတ်ကားမှာ ဆရာမတစ်ဦးအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်း ကမွေးရာပါ တက်တက်တဲ့ရောဂါရှိတဲ့ သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုများဆရာမလုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း အံ့အားသင့်လောက်ပါတယ်။ သူမဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခြားဘယ်အလုပ်ကိုမှ မလုပ်ချင်ဘဲ သူကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအလုပ်ကလည်း ဆရာမအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်လို့ လျှောက်တဲ့ နေရာတိုင်းကျောင်းတိုင်းကလည်း သူမရဲ့  ရောဂါအခြေအနေကြောင့် အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတိုင်းမှာ အလုပ်ခန့်ဖို့အတွက်အခက်အခဲ ဖြစ်စေတယ် ဆိုတာကတော့ လောကမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်မယ့် အရာတစ်ခုပါ။ ဒါတွေကို သူမကဘယ်လို ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျော်ဖြတ်မလဲ ဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာပါ။
အကြောင်းသင့်လို့ အလုပ်တစ်ခုမှာ ဆရာမဖြစ်ခဲ့တော့လည်း ကလေးတွေကို စာဘယ်လိုသင်မလဲ ? သူမစာသင်တဲ့ ကလေးတွေကရော သူမကိုနားလည်နိုင်ကြပါ့မလား ဆိုတာတွေကတော့ ဒီဇာတ်ကားအတွက် ဇာတ်ရှိန်မြင့်စေမယ့် အခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့  ရွေးချယ်မှု ဆိုတာ အဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ပဲအဓိကသက်ဆိုင်ကြောင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အရာရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး တွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မှု တွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်ကြောင်းကို သက်သေပြတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေ ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ပြီး ကိုယ့်ဘဝရဲ့  ပန်းတိုင်ကို ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခွန်းအားတွေနဲ့ရှာဖွေ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ လို့ဆန္ဒပြုရင်း စိတ်ခွန်းအားတွေဖြစ်စေဖို့ Hichki(2018) ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို အခုပဲကြည့်လိုက်ကြပါစို့ ။
အမြိုးသမီးတှအေတှကျ စိတျခှနျအားပေးတဲ့ ဇာတျကားဖွဈသလို မှေးရာပါပငျကိုယျခြို့တဲ့ မှုရှိနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ ဘဝကို အရှုံးမပေးဘဲ ရငျဆိုငျရဲတဲ့ သတ်တိကိုဖျောပွတဲ့ အိန်ဒိယဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကားနာမညျကတော့ Hichki(2018) ပဲဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံ ရဲ့ နာမညျကွီးဘောလီးဝုဒျ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ Rani Mukerji ရဲ့ ပီပွငျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကေိုတှရေ့မယျ့ အပွငျ မှေးရာပါတကျတဲ့ရောဂါရှိသူတဈဦးအနနေဲ့ ဇာတျလမျးတလြောကျလုံးမှာ ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျမှု ဟာ သူမရဲ့ အနုပညာအပျေါအရညျအခငျြးဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာကို ပွသနိုငျခဲ့တဲ့ ဇာတျကားတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကို ဒါရိုကျတာ Sidharth P Malhotra က ရိုကျကူးပုံဖျောထားတာဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ မတျလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာပွသခဲ့တာဖွဈတဲ့ အတှကျ ထှကျထားတာတောငျ လပိုငျးလောကျပဲရှိပါသေးတယျ။
ဒီဇာတျကားရဲ့ အဓိကဇာတျကောငျကတော့ မငျးသမီး Rani Mukerji ပါ။ သူမဟာ ဒီဇာတျကားမှာ ဆရာမတဈဦးအနနေဲ့ သရုပျဆောငျထားတာဖွဈပါတယျ။ ငယျစဉျကတညျး ကမှေးရာပါ တကျတကျတဲ့ရောဂါရှိတဲ့ သူတဈဦးအနနေဲ့ ဘယျလိုမြားဆရာမလုပျမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး အံ့အားသငျ့လောကျပါတယျ။ သူမဟာ ပညာတတျတဈယောကျဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အခွားဘယျအလုပျကိုမှ မလုပျခငျြဘဲ သူကိုယျတိုငျလုပျခငျြတဲ့ တဈခုတညျးသောအလုပျကလညျး ဆရာမအလုပျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီအလုပျကိုလုပျခငျြလို့ လြှောကျတဲ့ နရောတိုငျးကြောငျးတိုငျးကလညျး သူမရဲ့ ရောဂါအခွအေနကွေောငျ့ အငျတာဗြူးလုပျပွီးတိုငျးမှာ အလုပျခနျ့ဖို့အတှကျအခကျအခဲ ဖွဈစတေယျ ဆိုတာကတော့ လောကမှာဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတတျမယျ့ အရာတဈခုပါ။ ဒါတှကေို သူမကဘယျလို ဇှဲကောငျးကောငျးနဲ့ကြျောဖွတျမလဲ ဆိုတာကစိတျဝငျစားစရာပါ။
အကွောငျးသငျ့လို့ အလုပျတဈခုမှာ ဆရာမဖွဈခဲ့တော့လညျး ကလေးတှကေို စာဘယျလိုသငျမလဲ ? သူမစာသငျတဲ့ ကလေးတှကေရော သူမကိုနားလညျနိုငျကွပါ့မလား ဆိုတာတှကေတော့ ဒီဇာတျကားအတှကျ ဇာတျရှိနျမွငျ့စမေယျ့ အခနျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားလေးကို ကွညျ့ပွီးတော့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ ရှေးခယျြမှု ဆိုတာ အဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ပဲအဓိကသကျဆိုငျကွောငျး ကိုယျကိုယျတိုငျရှေးခယျြလိုကျတဲ့ အရာရဲ့ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုး တှကေလညျး ကိုယျ့ရဲ့ရှေးခယျြမှု စိတျပိုငျးဖွတျနိုငျမှု တှနေဲ့သာ သကျဆိုငျကွောငျးကို သကျသပွေတဲ့ ဇာတျကားတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှေ ရှေးခယျြမှုမှနျကနျပွီး ကိုယျ့ဘဝရဲ့ ပနျးတိုငျကို ကိုယျပိုငျစိတျခှနျးအားတှနေဲ့ရှာဖှေ ဖွတျသနျးနိုငျကွပါစေ လို့ဆန်ဒပွုရငျး စိတျခှနျးအားတှဖွေဈစဖေို့ Hichki(2018) ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးကို အခုပဲကွညျ့လိုကျကွပါစို့ ။